1550 nm Er Erbium Glass Laser Fractional laser / fiber laser oo loogu talagalay mashiinka ka soo baxa laalaab duudduubnaanta wajiga
Aragtida daaweynta ee ah 1550nm erbium glass fiber laser maqaarka bini'aadamka waxaa la dabciyey 1mm sanad kasta ilaa da'da 25 jir. Taasi waa, maqaarku guud ahaan wuxuu u muuqan doonaa dabacsan qiyaastii 3.5cm da'da 60. Dareenka hareeraha xubnaha indhaha ee daloolsan iyo afka oo u muuqda qaab duuduub ah. 1550nm dot-matrix laser laalaab duudduubku waa inuu kiciyo daloolada wanaagsan ee maqaarka dabacsan (1cmX 1cm wuxuu yeelan karaa ilaa 784 dhibco firfircoon) iyada oo loo marayo godadka wanaagsan si loo sameeyo unugyo cusub oo maqaarka ah, u yaraado l ...
Ipl Opt Laser Mashiinka Mashiinka Timo Bixinta Jirka joogtada ah Qalabka Qurxinta
Mabaadi'da Daaweynta Jiil cusub oo ah iftiinka OPT ayaa ku shaqeyn kara maqaarka maqaarka si uu u soo saaro sawir-qaadis iyo kicinta noolaha si looga saaro dhammaan noocyada midabbada midabbada leh, fiilooyinka dhiigga iyo ka-goynta timaha; hirarka korantada-korantada-sarreeya ee ay soo saarto soosaaradu waxay soo saari doonaan gariir-xawaare sare leh oo ku saabsan maaddooyinka biyaha ee unugyada maqaarka (tiro badan oo maaddooyinka biyaha ah, molecules polar iyo ion lagu eedeeyay) iyadoo loo marayo epidermis, waxayna dhalinaysaa tamar kuleyl ah illaa 45-60 digrii iyada oo loo marayo wareegga xawaaraha sare ...
Qalabka Erbium Muraayadda Jajabka ah ee Laser 1550nm Qalabka Qurxinta Oo Aan Cabir Lahayn / Nabarrada Finanka Ka Qaadista Wejiga Qaadista
Aragtida daweynta ee 1530nm erbium galaaska leysarka laser Waa aalad aan-duullaan ahayn oo Erbeum galaas ah oo leh dherer dhererkiisu yahay 1550nm. Mawjada dhererkeedu yahay 1550nm waxay si qoto dheer u quseysaa maqaarka maqaarka iyada oo loo marayo epidermis, halkaas oo ay ku nuugaan biyaha ku jira unugyada waxayna keenaan heerkul sare oo ku jira unugyada. Unugyada si tartiib ah ayaa loo kululeeyaa, waxayna keentaa kala-soocid unug, halka maqaarka dusha Laydhka tamarta kuleylka daran ee xaraashka ah wuxuu si xushmad leh u burburiyaa gl ...
Mashiinka Mashiinka Tattoo Laser Picosecond
Picosecond laser kaas oo loogu talagalay ka saarista tattoo midabbada badan leh. Awood u leh dib u soo nooleynta maqaarka oo aan lahayn waqti dhimis iyo ka saarista midabka midabka oo dhan, sida nabarrada finanka, maqaarka dhaawaca qoraxda. Laablaab iyo melisma iwm Miyaad ka qoomameyneysaa sawirkaaga? Ma ka daashay dhibco da'da madax adag? Raadinta muuqaal dhalinyaro ah? Iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyaddii ugu dambeysay, aaladda Picosecond-kii ugu dambeeyay, waligeed ma fududaan oo dhaqso badan in meesha laga saaro dhibco iyo taatuuga aan la rabin Tiknoolajiyada midabaynta iyo Tattoo-ka ayaa runtii ...
1,100% Jarmalka ayaa soo dhoofisay Laser Stacks 2, safayr dhab ah oo Crystal ah, marinka ugu fiican ee qaboojinta 3. 12 * 20mm cabbirka weyn ee weyn, oo leh habka daaweynta "IN-Motion", xawaaraha daaweynta ugu dhakhsaha badan 4. 808nm seddex dherer dherer ah. natiijada achevinq ee ugufiican dhamaan noocyada timaha iyo dhamaan noocyada maqaarka Diode laser timo tignoolajiyada waxay ku saleysan tahay isbedelka xulashada ee iftiinka iyo kuleylka. Laser-ka wuxuu maraa dusha sare ee maqaarka si uu u gaaro xididka xididdada timaha Iftiinka waa la nuugi karaa loona beddeli karaa kuleyl dhaawac qaba ha ...
1060nm 4 Xamili Diode Laser Body Qaab Mashiinka Khafiifinta Khafiifinta
1060nm diode laser mashiinka khafiifinta jirka waa daaweyn laser-ku saleysan oo aan faafin, kaas oo loo adeegsan doono bartilmaameedka iyo yareynta ama baabiinta unugyada baruurta si toos ah. Waxay u shaqaysaa ragga iyo dumarka iyo noocyo kala duwan oo jirka ah. Hal nidaam wuxuu qaadanayaa celcelis ahaan 25 daqiiqo wuxuuna bartilmaameedsan karaa aagag badan hal mar. Nidaamka leysarka 1060nm diode wuxuu qaataa tiknoolajiyad heer sare ah oo jirka ku faafa, oo adeegsata leysarka 1060nm oo inta badan bartilmaameedsada nudaha adipose si loo yareeyo baruurta madax adeyg ee ku jirta ...